एनसेलमा जति धेरै ब्यालेन्स खर्च गर्‍यो त्यति नै सुलभ डेटा, यस्तो छ नयाँ अफर « Tech News Nepal
काठमाडौं । एनसेल आजियाटाले आफ्ना ग्राहकका लागि आकर्षक साप्ताहिक पे एज यू गो (अर्थात् पेएवाइजी) योजना ल्याएको छ, जसअन्तर्गत ग्राहकले करबाहेक ४० पैसा प्रति एमबी सम्ममा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यो योजना बुधबारदेखि लागू भएको छ । पेएजयूगो अर्थात मेन ब्यालेन्सबाटै विद्यमान प्रति एमबी कर बाहेक रु. २ मा डेटा सेवा प्रयोग गर्ने र सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्नका लागि प्याक सुविधा नलिने ग्राहकलाई ध्यानमा राखी सुलभ दरमा सेवा प्रदान गर्न यो योजना ल्याइएको हो ।
यस योजनामा ग्राहकले आफ्नो मेन ब्यालेन्सबाट जति धेरै खर्च गर्दछन् त्यसै अनुरुप डेटाको शुल्क अझ सुलभ हुँदै जान्छ ।
यदि ग्राहकले पेएजयूगो अन्तर्गत एक हप्तामा डेटाका लागि रु. २० सम्म खर्च गरेमा विद्यमान पेएजयूगो शुल्क रु. २ प्रति एमबी पर्दछ ।
एक हप्तामा ग्राहकले रु. २० देखि रु. ५० सम्म डेटा सेवामा खर्च गर्ने बितिकै सेवा प्रयोगका लागि प्रति एमबी शुल्क रु. १ मा झर्दछ ।
त्यसैगरी यदि ग्राहकले एक हप्तामा रु. ५० भन्दा बढी खर्च गर्ने बितिकै प्रति एमबी मात्र रु ४० पैसामा मेन ब्यालेन्बाटै डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्छन् ।
साप्ताहिक चक्रमा हरेका हप्ता आइतबारदेखि शनिबार सम्ममा ग्राहकले पेएजयूगो डेटा अन्तर्गत गरेको खर्चको आधारमा यो योजना सञ्चालन हुन्छ ।
जस्तै कुनै ग्राहकले आइतबारदेखि बुधबार सम्ममा पेएजयूगो डेटा सेवामा रु. २३ खर्च गरेमा ग्राहकको मेन ब्यालेन्सबाट रु २० भन्दा बढि खर्च हुने बित्तिकै पेएजयूगो शुल्क त्यही हप्ताको शनिबार मध्यरातसम्मका लागि रु. १ प्रति एमबीमा झर्नेछ ।
त्यस्तै सोही ग्राहकको खर्च उक्त हप्ता रु. ५० भन्दा बढि हुने बित्तिकै ग्राहकले त्यस हप्ताको शनिबार मध्यरातसम्मका लागि मात्र ४० पैसा प्रति एमबीमा डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्दछ ।
आफ्ना ग्राहकका लागि मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवा सुनिश्चित गर्ने यो आकर्षक सेवा ल्याउन पाएकोमा एनसेल निकै हर्षित रहेकोे कम्पनीले जनाएको छ ।
सुलभ दरमा डेटा प्रयोग गर्न डेटा प्याकहरु सबै भन्दा राम्रो विकल्प भए पनि, यस योजनाले कुनै डेटा प्याक सुचारु नगरी पेएजयूगोमा डेटा चलाउने ग्राहकलाई ठूलो फाइदा पुग्ने विश्वास एनसेलले लिएको छ ।
३२ देशमा पुग्यो एलन मस्कको स्टारलिंक इन्टरनेट
काठमाडौं । स्टारलिंकको इन्टरनेट सेवा अब विश्वका ३२ देशमा उपलब्ध हुने भएको छ । स्पेसएक्सले
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकहरू आफूतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका अफर तथा सहुलियत प्याकेजहरू ल्याउने
अमेरिकाका गरिब परिवारले निःशुल्क इन्टरनेट पाउने
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले गरिबीको रेखामुनि रहेका घरमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने